*မြန်မာ့ဘိန်းလုပ်ငန်းကို ခြေရာခံခြင်းပထမပိုင်း” | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
ကုလသမဂ္ဂ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အဆိုရ မြန်မာနိုင်ငံလို့ အများက သိကြတဲ့ ယခု တရားဝင်နာမည်အရ မြန်မာလို့ ခေါ်ဆိုနေကြပြီဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးဘိန်းထုတ်လုပ်ရေးမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ (၇)နှစ်တာကာလအတွင်း ၂၆ ရာနုန်း ပိုပြီး မြင့်မားလာနေပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါထုတ်လုပ်မှု တန်ချိန်ပေါင်း ၈၇၀ ထိ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂ၏ မှတ်တမ်းများအရ မြန်မာ အစိုးရမှာ ၂၀၀၂ ခုတွင်းမှ မူးယစ်ဆေးဝါ ထုတ်လုပ်မှု လျော့ကျရေး ကျိုးပမ်းခဲ့ချိန်မှစပြီး မြင့်တက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ကမ္ဘာ့မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်အရ အာဖကန်နိစ္စတန်နိုင်ငံပြီးရင် ဒုတိယလိုက်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒေသတွင်းမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး တန်ဘိုးမှာမြင့်တက်နေပြီး ဈေးကောင်းရနေလို့ပါပဲဟု ပညာရှင်များက ယုံကြည်ကြပါတယ်။
Burma is second only to Afghanistan in terms of global opium production, and experts believe higher prices for narcotics in the region.
လွန်ခဲ့သည့် မတ်လအတွင်းမှာ မြန်မာအစိုးရမှ အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကုလသမဂ္ဂမှကြီးမှူးကျင်းပသော ဗီနာမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးညီလာခံ ကျင်းပစဉ်က တက်ရောက်ခဲ့သူ တွေက မြန်မာပြည်အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါး အမြစ်ပြတ် တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အဖြေရှာမှုသည် နည်းလမ်းကျသော အဖြေတစ်ရပ်မဟုတ်ကြောင်း ဖွင့်ဟ ၀န်ခံပြောဆိုပါတယ်။
In March, the government sent its first high-level delegation to the U.N. Commission on Narcotic Drugs in Vienna, where officials admitted that eradication alone was notasolution for Burma.
မြန်မာဆိုသော ဗမာပြည်လို့သိကြတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုဟာ ၁၇၅၀ ခုနှစ် အစောပိုင်းဖြစ်တဲ့ ကုန်ဘောင်မင်းဆက် အာဏာရခဲ့စဉ်ကတည်းကလို့ ဆိုပါတယ်..
Opium has been present in Burma (now also known as Myanmar) since as early as the 1750s, during which the Kongbaug Dynasty was in power.
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ ၁၉၄၈ ခုနှစ်က ဗမာပြည်ကို မူးယစ်ဆေးဝါထုတ်လုပ်ကုန်သွယ်မှု လျော့ချဖို့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကူညီတွေပေးခဲ့ဘူးတဲ့အပြင် ၁၉၇၄ နှင့် ၁၉၇၈ ခုနှစ် အကြားမှာ မြန်မာပြည်က မူးယစ်ဆေးဝါး ကုန်သွယ်မှုများကို ချေရာခံနိုင်ဖို့ ရဟတ်ယာဉ် (၁၈) စင်းကို လက်ခံရရှိဘူးပါတယ်။
The United States provided economic aid to Burma in 1948 to reduce the opium trade,between 1974–78, Burma received eighteen helicopters from the US for opium caravan interception.
၁၉၉၀ခုနှစ်အတွင်းမှာ မြန်မာက တကမ္ဘာလုံးမှာထုတ်လုပ်နေတဲ့ ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုမှာ ထက်ဝက်ကျော်ထိကိုပင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၈ မှာတော့ အဆိုပါ ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ထိကျဆင်းသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ၁၉၉၉ မှာတော့ အဆိုပါ မြန်မာပြည်ဟာ ၂၀၁၄ ခုမှာ ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု ကင်းစင်တဲ့ တိုင်းပြည်နယ်မြေတစ်ခု အဖြစ် ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။
In 1990, Myanmar was producing more than half of the world’s opium. The percentage dropped to one third by 1998. In 1999, the country reportedagoal to become opium-free by 2014.
မြန်မာပြည်အတွင်းမြောက်ပိုင်းဒေသ ဖြစ်သော တရုတ်ပြည်နှင့် ဆက်စပ်နေသော ဒေသများမှ အရှိန်ဟုန်ကြီးမားသော သစ်တောပြုန်းတီးအောာင်သစ်ခုတ်ရောင်းချမှုများမှာ ဒေသ၇ှိ တောင်ယာသမားများအတွင် ပို၍ အဆင်ပြေပြေ စိုက်ပျိုးနိုင်သော ဘိန်းစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရပါတယ်လို့ ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးမှ အင်္ဂါနေ့တွင် ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုပါတယ်။
Rampant deforestation in Myanmar’s (Burma’s) northern states, bordering China, has led to an increase in opium cultivation byanew crop of more sophisticated farmers,asenior United Nations official acknowledged on Tuesday.
မြန်မာ့ ဘိန်းဖြူတွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ဟောင်ကောင်းမရောက်ခင် အဓိက ကြားခံအဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံမှတဆင့် ဖြတ်သန်းလာပြီး နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ယခုအခါမှာတော့ အဆိုပါ နိုင်ငံတကာဖြန့်ဖြူးရေးလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းဖြစ်သော ယူနန်၊ ဂူဇောင်း၊ ဂွမ်ဇီ နှင့် ဂွမ်ဒေါင်းစသော ပြည်နယ်များ လမ်းကြောင်းမှပြောင်းလဲ ဖြတ်သန်းနေရခြင်းမှာ ဟောင်ကောင်းသို့ မရောက်ခင် တရုတ်ပြည်တွင်းရှိ မူးယစ်ဆေးကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှု မြင့်တက် လာခြင်းကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။
Heroin was typically transported from Burma to Thailand, before being trafficked by sea to Hong Kong, which was and still remains the major transit point at which heroin enters the international market. Now, drug trafficking has circumvented to southern China (from Yunnan, Guizhou, Guangxi, Guangdong) because ofagrowing market for drugs in China, before reaching Hong Kong.
အဓိက မူးယစ်ဆေးဝါး ကုန်သယ်များ၏ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထင်ရှားဆုံးပြယုဂ်မှာ အဆိုပါ ကုန်သယ်များအား မြန်မာ့စီးပွားရေးအတွက် အခြားသော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ပတ်သက် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားခြင်းအရ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊လေကြောင်းလိုင်းပြေးဆွဲမှု လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့် အခြားသော လူမှုအဆောက်အုံ တည်ဆောက်မှုကိစ္စရပ်များတွင် တွေ့ရသည်။ အဆိုပါ မူးယစ်ကုန်သယ်ရာဇာများ၏ လူမှု အဆောက်အုံ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတို့မှာ ငွေကြေးလျော်ဖွတ်မှုဆိုင်က်စ္စဖြစ်သော တရားမ၀င်ငွေများအား တရားဝင်အောင် လုပ်ပေးခြင်းက မူးယစ်ဆေးဝါးများကို ပို၍ ထုတ်လုပ်ကုန်သွယ်မှုများ တိုးပွားလာအောင် အထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်နေပြီး အဆိုပါ လုပ်ငန်းများမှလည်း ပို၍ အကျိုး မြတ်များ ရရှိလာအောင် ခွင့်ပြု လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားကြောင်း သိရသည်။
The Myanmar prominence of major drug traffickers has allowed them to penetrate other sectors of the Burmese economy, including the banking, airline, hotel and infrastructure industries. Their investment in infrastructure have allowed them to make more profits, facilitate drug trafficking and money laundering.
၂၀၁၂ နှစ်ကာလအတွင်း အိမ်ထောင်စုပေါင်း သုံးသိန်းမျှလောက် မူးယစ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ အတွင်း ပါဝင်ပတ်သက်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဆိုပါ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်းမှာပင် တရုတ်ပြည်တွင် မူးယစ်ဆေးစွဲသူပေါင်း (တစ်ဆယ် ဒသမ တစ်သန်း)အား မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်တွင် (လေး ဒမသ သုံးသန်း)ခန့် မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်စွဲကပ်မှု ရှိကြောင်း နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ လေ့လာသုတေသနပြုချက်အရ ၇၀ ရာနုန်းသုံးစွဲသူမှာ အာရှ ပါစီပိတ်ဒေသမှဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာပြည်မှ မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုမှာ ၆၉၀ တန် မက်ထရစ်တန်ခန့်ရှိပြီး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၅၉ သန်းခန့် ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းပါသည်။
As of 2012, some 300,000 households in Burma were involved in the industry. As of 2012, China had over 10.1 million registered and Myanmar had estimated over 4.3 million drug addicts and accounted for over 70 per cent of all heroin consumption in the Asia-Pacific region. In 2012, Myanmar produced 690 metric tons withavalue of approximately $359 million.
← ဖွတ်တက်သော တောင်ပို့ အတွင်းမှ ခြ ကောင်များ အပိုင်း(၁) အပိုင်း(၂)
သူကမြင့်ဆွေညီမမိငြိမ်း မိငြိမ်းဆိုတာဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ရဲ့အချစ်ဆုံး တူအရင်းခေါက်ခေါက်နဲ့ယူထားတာ →